Krzysztof Piatek oo diyaar u ah inuu ku biiro Kooxda Real Madrid xitaa haddii uu noqonayo dooqa labaad ee Weerarka – Gool FM
(Madrid) 16 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda AC Milan ee Krzysztof Piatek ayaa lagu soo waramayaa inuu aad u doonayo inuu ku biiro Kooxda Real Madrid, wuxuuna xitaa diyaar u yahay inuu noqdo dooqa labaad ee weerarka koowaad Karim Benzema ee garoonka Bernabeu.
Piatek ayaa dhaliyey 19 gool 21 kulan oo uu u saftay naadiga Genoa ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin kooxda AC Milan, taasoo uu xilli ciyaareedkii hore ku dhammaystay isagoo u dhaliyey 11 gool 21 kulan oo uu u ciyaaray tartammada oo dhan.
24-sano jirkaan ayaa ku dhibtooday xilli ciyaareedkan, si kastaba ha ahaatee waxa uu maareeyay saddex gool 12 kulan oo uu horyaalka Serie A u saftay kooxdiisa reer Talyaani.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Spain, Piatek ayaan ka qoomameynay doonin inuusan ku biiro Real Madrid marka la siiyo fursadda bisha Janaayo, waxaana Weeraryahankan uu rajeynayaa in fursad uu ugu dhaqaaqo Bernabeu ay imaan doonto.
Piatek ayaa xitaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu aqbalo inuusan noqonin dooqa koowaad ee Weerarka kooxda reer Spain haddii uu dhameystiri karo ku biirista kooxda riyadiisa ah ee uu hoggaamiyo Tababare Zinedine Zidane.
Luka Jovic ayaa laga soo iibsaday kooxda Eintracht Frankfurt suuqii xagaaga, iyadoo loo arkayay inuu Benzema kula tartami doono booska safka hore, laakiin 21-sano jirkaan ayaa kaliya hal gool dhaliyay 11 kulan oo uu u saftay Los Blancos xilli ciyaareedkan.
Laacibka Kooxda Arsenal ee Dani Ceballos oo diiddan inuu dib ugu laabto Real Madrid... (Maxay tahay Sababtu?)